UJan Stephenson: I-Biographie kunye neProfayili yomSebenzi
UJan Stephenson Wenza iGlam ngo-1980 uLPGA Tour
UJan Stephenson wayengomnye wabadlali abaphezulu kwiigalofu zeentombi kuma-1970 nakwa-1980. Waletha umdlalo kumdlalo, kodwa abanye bakholelwa ukuba ugxininiso kwisiganeko sobhinqa lwalugubungele igalofu yakhe. Kwaye igolfu yayilungile: uStephen wazuza amanqindi amanqabana amathathu, yonke inxalenye yesibini yokuqala yee-1980.
Umhla wokuzalwa: NgoDisemba 22, 1951
Indawo yokuzalwa: eSydney, e-Australia
Isiteketiso: Ngethuba leentsuku zokutyelela ixesha elizeleyo, wabizwa ngokuthi "uNana" ngabanye abadlali abancinci ngenxa yokunceda kwabo batsha.
Inani leeMpumelelo zikaJan Stephenson
I-LPGA Tour: 16 (ezi ntlawulo zidweliswe ngezantsi)
IiMidlalo ezinkulu: 3
Iimpumelelo zintathu zikaStefano zazingama-1981 du Maurier Classic , 1982 ye-LPGA Championship kunye no-1983 US Women's Open.
Amabhaso kunye neMbeko
I-LPGA Tour Rookie yoNyaka, ngo-1974
Ilungu, iMidlalo yaseAustralia IHolo loLwazi
UJan Stephenson Biography
UJan Stephenson wayeyinto ethi "It Girl" yegalufa yegalufti kwiminyaka yee-1980, enye yeenkwenkwezi zokuqala zeLPGA zokuvakalisa ngokucacileyo kunye nokuxhasa indlela yokuthengisa ngesondo ngokuthengisa. Kodwa ugxininiso kwi-blonde-pinup yakhe ebukeka ngezinye iinkcenkceshe oko kwakungumdlalo omuhle wegalufa.
Ngoxa wayeseneminyaka engama-10 ubudala, uSteinson watyhola amahlanu eMidlalo yase-Australia yaseNew yaseWestern Wales e-Australia, eqala ngo-1964, waza walandela emva kweeNtlanu zeNew South Wales Junior Championship. Waguquka ngomnyaka we-1973 waza wanqoba iAustralia Open ngaloo nyaka. UStephen wajoyina iLPGA Tour ngowe-1974 waza wabizwa ngokuba nguRokie weNyaka ngokugqibelela kwe-28 kwiphepha lemali.
Ukuphumelela kwakhe kokuqala kweLPGA kwaba ngu-1976 uSara Coventry Naples Classic. Ixesha lakhe elivelisa kakhulu lalingeneminyaka yokuqala yee-1980 xa ephumelele zonke izikhundla zakhe kwiminyaka elandelelanayo: u-1981 du Maurier (owabizwa ngokuba nguPeter Jackson Classic waza wabuya waba ngumntu oyintloko kwi-Women's British Open), i-1982 ye- LPGA Championship , no-1983 I-US Women's Open .
UStephen waba ngumntu owaziwayo ngenxa yesondo sakhe sokubhenela njengegalufa lakhe ekuqaleni kweya-80s, xa ehlala ebhanjini - efihla kuphela iibhola zegalufu ezizalisa i-tub (i-pose yavuselela ngo-2017 eneminyaka engama-65 kwi-photoshoot golf.com) - kwaye kamva kwikhalenda ye-pinup. Wayeneenwele ezinkulu, i-makeup ekhanyayo, kunye neengubo zokubamba amehlo, kwaye wakhuthaza i-LPGA Tour ukuba yamukele ngokupheleleyo indlela yokuthengisa: "Khangela njengowesifazane kwaye udlala njengomntu," watsho.
Akukho mbuzo uSteinson wakhula ngabaphulaphuli i-LPGA Tour ngeli xesha kunye neendlela zakhe ezimnandi kwiigalufa, kodwa abaninzi bagxeka loo ndlela. Yaye ingakanani ekujoliswe kuyo, ukuba ikhona, i-LPGA, njengotyelelo, kufuneka ibeke kwibukeka begaluli zayo ukuba ithengise ityelelo kubaphulaphuli bezemidlalo njengamadoda namhlanje.
Kwi-golf course, uStephen won kathathu ngo-1981, ngo-1983 no-1987, abo bawuthatha ngo-1987 kuba ngowokugqibela kwi-LPGA.
UStephen waqhubeka edlala imicimbi ye-LPGA kwiminyaka ye-1990, kodwa wayephazamiseka ngenxa yokulimala ngexesha lokungena eMami ngo-1990. Umnxeba wakhe wesobunxele waphulwa kwiindawo ezimbini, ukulimala okwakumkhathaza ngokudlala kwindawo ebandayo okanye emanzi. Ukususela ngo-1990 kuqhubeke, akazange aphele phezulu kwe-30 kwi-LPGA imali.
UStephen waqhubeka ukuphumelela kwiTyhuna yeGosa leGalefu leMatriki (ngoku kuthiwa yiLendends Tour), ityelelo encedayo.
Ngomnyaka ka-2003, waba ngumfazi wokuqala ukuba adlale kwi-Tour Tour, elahleka ukusikwa. Kungekudala ngaphambi kwesi siganeko, wabangela ukuphikisana namazwana agxothwa ngabantu abagulisa i-golf kwi-LPGA Tour.
UStephen uphakathi kwabasetyhini abambalwa kwiklasi yoqulunqo lwezoshishino kwaye bavelise ividyo yevidiyo kubantu abane-arthritis. Wabuye wakhulula imigaqo yegalufa yeVHS kwii-1980s nakuma-1990 (enye enye ngoku i-YouTube). Imizamo yakhe yokunceda iye yaquka ukuba nguSihlalo ohloniphekileyo weSizwe seMicrosoft Sclerosis Society.
UJan Stephenson Trivia
Kwi-12 ye-Stephenson yokuphumelela kwe-LPGA ye-16 ye-LPGA, umgijimi waqhubeka nokufumana ukhetho kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi .
UJan Stephenson ubhale izimbobo ezisibhozo ezodwa kwi-LPGA ukuncintisana, ezibophelelwe ngowona wesibini kwimbali yeTyelelo.
Ngokuqhelekileyo uStephenson uthathwa njengengcali yokuqala yokutyelela ibhinqa ukuze afike kwishishini loyilo lwegalufa.
Ngo-2011, wayenomdla kwi-TV yase-Australia yokuDansa ngeNkwenkwezi .
UJan Stephenson: "Kufuneka sikhuthaze isibheno sesondo, yinto ebomi yobomi. Abantu ababukeleyo baninzi ngabantu, kwaye abayi kuqhubeka bejonge ukuba amantombazana awayinto enhle."
"Abagqobi begolisa benza abathandekayo abathandekayo kuba banomdla omkhulu." - Stephenson
Uluhlu lwe-LPGA kaStephen kunye nezinye iiNkqubo zePro
Nantsi ingqungquthela yegalufa ezuzwe nguJan Stephenson kwiLPGA Tour:
Ngo-1976 uSarah Coventry Naples Classic
1976 iBirmingham Classic
Ngowe-1978 wamazwe ngamazwe
1980 iSun City Classic
Ngo-1981 uPeter Jackson Classic (kamva wabizwa ngokuba yi-du Maurier Classic)
Ngo-1981 uMary Kay Classic
Ngo-1981 iUnited Virginia Bank Classic
1982 LPGA Championship
1982 Lady Keystone Vula
1983 I-Tucson I-Conquistadores I-LPGA Vula
1983 I-Lady Keystone evulekileyo
1983 I-US Women's Open Open
1985 GNA Classic
Ngowe-1987 uSanta Barbara Open
1987 i-Safeco Classic
Ngowe-1987 uKonica San Jose Classic
Yaye iphumelele kwezinye iindwendwe zehlabathi:
1973 Ladies Open Ladies (ALPG)
Ngo-1977 i-Ladies Ladies Open (ALPG)
Ngowe-1981 I-World Women's Golf Tournament (JLPGA)
1985 I-Hennessy iFrench evulekileyo (LET)
Ngo-1985 iNichirei Ladies Cup (JLPGA)
Yayineminyaka Engakanani Imigodi Yeengqungquthela xa Yaba I-Golfer Golfer?
Yayiyini i-Tiger Woods Divorce Settlement kunye no-Elin Nordegren?
Bhetele Daniel Career Profile
UC Curtis Strange, Omnye wabadlali abaPhambili beGalofu kuma-1980
Natalie Gulbis Biography
Kwenzeka Njani Ukude?
UKarrie Webb: I-Golfer ye-Australia eyona mkhulu kunabo bonke
I-Tiger 'Yasht' Yacht: Yintoni igama, ubungakanani kunye neendleko?
Iimfihlakalo ezifihlakeleyo kwiimvanoveli zika-Agatha Christie
Iingoma eziphezulu zeGenesis yee-80s
Iindlela ezili-8 zokuphepha kwaye ngokuphumelelayo bulala umthi
Ukuhlaziywa koLwaphulo-mthetho nokuGweba
Ubukhosi base-Ottoman ... Iinkcukacha kunye neMephu
Indlela yokuPaza iRiples kwi-Ocean
Ihlabathi eliqhelekileyo kwihambo likaHero?
Izizathu zoBomi boBomi be-King Midas babengumphathi
I-Top 10 entsha ye-Hip-Hop abaculi baka-2011
Trabajo en Estados Unidos - I-Opciones legales
IiRhafu zeRhafu zeThengi zokuThengisa ngePhondo kunye neNgingqi
I-Krill Facts kunye ne-Uses
Izifo zengxaki zeGalufa - ngokubanzi
Iisombululo zokufundisa kwiKlasi eliPheleleyo
IArrhenius Acid Inkcazo kunye nemizekelo
Indlela yokusebenzisa iCrayon njengeKhandlela
Iiresiphi zokukhawulela iinambuzane ezixhamlayo kwi-Garden yakho
Ukuqonda isicatshulwa sokuFunda
IGrauballe Man (eDenmark) - I-European Age Iron Body Bog
Omdala 'Isibhedlele Esiqhelekileyo' i-Star Stuart Damon
Iiklasi zaseSpeyin zamahhala zamahhala
Funda ukudibanisa okusisiseko "iNdodana" (ukucula)
I-BRIC / i-BRICS ichazwe
I-Biography ka-Enrique Pena Nieto, uMongameli waseMexico
SUNY Geneseo Admissions
Izandla eziQala kakhulu kwiTexas Hold 'em